Atletico Madrid oo Waqtiga dhimashada guul ka gaartay Eibar Kulan ka tirsan Horyaalka la-liga Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Atletico Madrid oo Waqtiga dhimashada guul ka gaartay Eibar Kulan ka tirsan...
Mar kale ayuu xidiga Luis Suarez fariin u dirayaa kooxda Barcelona markii ay si qalad ah iskaga soo direen isagoo labo mar shabaqa soo taabtay ciyaar kooxda Atletico Madrid la ciyaartay kooxda Eibar oo qeyb ka ah Horyaalka Spain.
Xidigaha Atletico Madrid ayaa caawa u muuqday kuwa barbaro lagu qaban lahaa lakin kubad qalad aheyd oo lagu galay Luis Suarez diilinta ganaaxa ayuu u badalay Gool daqiiqadi 89-aad ee ciyaarta isago goolhayaha si qurux badan ugu dulqaaday isla goolka hore isaga ayaa u dhaliyay Daqiiqadii 40-aad ee ciyaarta guud ahaan kulankan ayaa ku soo dhamaaday 1-2.
Atletico madrid ayaa hada hogaanka ku heysa 7 dhibcood oo nadiif ah waxana ku soo xigta Real Madrid oo leh 37 dhibcood.
Kooxda Atletico Madrid ayaa Kulanka Xiga la ciyaaridoonta kooxda Valencia isla Horyaalka Spain ee la Liga.
Previous articleLiverpool oo guul daro kala kulantay Burnley Kulan ka tirsan Horyaalka Premier League
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Gabriel Veron oo ku biiri kara Man Utd iyo Qodobo kale